IZITYALO ZANGAPHAKATHI EZIFANA NOKUKHANYA KWELANGA NGOKUTHE NGQO - UKUHOMBISA
Eyona Ukuhombisa Izityalo zangaphakathi ezifana nokukhanya kwelanga ngokuthe ngqo
Kwesi sikhokelo sabelana ngezityalo zangaphakathi ezifana nokukhanya kwelanga ngokuthe ngqo kubandakanya ezona ndawo zigcweleyo zelanga kunye nokunkcenkceshela kunye nendlela yokukhathalela iingcebiso.
Kukho izibonelelo ezingapheliyo kwabo bafuna izityalo ezikhula kwindawo ephantsi yokukhanya, enobumnyama njengendawo yokuhlala engenafestile kunye neeofisi.
Nangona kunjalo, kuthi thina baneefestile ezininzi zokungenisa iintloni zokungenisa yonke imitha yelanga, kukho uluhlu olude lwezityalo eziza kuthi ngovuyo zithambise.
Izityalo eziKhanya ngokuKhanya kwelanga
Isucculents kunye neCacti
Eyona ndawo igqibeleleyo yelanga epheleleyo
Ngqo iiNdlu zeNdlu zeQ & A
Zingaphi iiyure ezithathwa njengelanga elipheleleyo?
Ungaxela njani ukuba isityalo sifumana ilanga elaneleyo?
Ngaba ukukhanya kwelanga ngefestile lilanga elithe ngqo?
Ngaba ukunkcenkceshela ilanga akulunganga?
Ukunkcenkceshela izindlu zendlu kwiingcebiso zelanga
Iingcebiso ezigcweleyo zezindlu zeLanga
Okumangalisa kukuba, zininzi kakhulu izityalo ezikhetha ukukhanya kwelanga ngokuthe ngqo kunezo ezifuna umthunzi.
Nangona ngesiqhelo, ithegi yokufaka indlu evela kwivenkile enkulu yebhokisi iya kukuxelela ukuba zonke iintlobo ezikule ndawo zifuna ukukhanya okukhanyayo, okungangqalanga, kuninzi kakhulu kuyo kunokufumana nje indawo entle yesityalo sakho esitsha endlwini yakho.
Nazi ezinye izityalo zangaphakathi ezifana nelanga ngqo:
Ngokwenyani nayiphi na i-succulent okanye i-cactus iya kufuna ukukhanya kwelanga ngokuthe ngqo, nokuba ungathini na kwithegi yokhathalelo.
Ngaphandle kwayo, ezi zityalo ziya kukhula kwaye zibe zi-bushy (ezibizwa ngokuba yimilenze), ezinokuphela zijongeka zinganqweneleki. Izityalo eziqhelekileyo kolu luhlu zibandakanya i-aloe, kalanchoe, jade, kunye nezityalo zamatye eziphilayo.
Ukugqunywa kwincam yamagqabi ukuya kubomvu obomvu, yellows, kunye nemifuno, ii-crotons zifuna ukukhanya okuqaqambe kakhulu ukuze ifotosinthesize kwaye ikhule.
Imithombo emininzi ye-Intanethi iya kuthi ii-crotons azidingi kukhanya kuqaqambileyo; Nangona kunjalo, baya kukhula ngokucothayo ngaphandle kwawo!
Kukho iindidi ezimbalwa zesundu ezenzelwe ukuba ngaphakathi zinganyamezela ukukhanya okuphakathi, kodwa uninzi, kuba zihlala ngaphakathi, ziya kudinga ukubekwa elangeni elipheleleyo ukuze zikhule.
Izimo zokukhanya eziphantsi ziyabonakala xa isundu siyeka ukubeka iifreyimu ezintsha, okanye ukuba amagqabi asasazeke kakhulu phakathi.
Olu lolunye uhlobo oluhlala ludweliswe ngokungalunganga kudidi lokutshala ngaphandle kokukhanya, kodwa okunene lufuna ukukhanya okuninzi ukuze kuphume naluphi na ukukhula okutsha.
Xa ishiywe kwikona emnyama, izityalo zeenyoka ziya kuhlala zilinganayo; Nangona kunjalo, bakuba bebekwe kwigumbi eligcwele ilanga, bakhula ngokukhawuleza okukhulu.
Izityalo zenyoka zikwabizwa ngokuba yiSansevierias okanye iDracaena trifasciata. Isibonelelo esikhulu solu hlobo sesakhe isityalo esisusa ityhefu emoyeni .
Ngelixa ii-philodendron kufuneka zibekwe kude kwiglasi yokwenyani yeefestile ukunqanda ukutsha, bathande ilanga ngokupheleleyo.
Naluphi na uhlobo lwe-philodendron luya kukunyamezela ukukhanya okungangqalanga kwelanga, kodwa ukuba into oyifunayo bubuhle, ubuhle be-vining, ukukhanya kwelanga ngokuthe ngqo kuyakukhawulezisa inkqubo.
Ukuthandwa ngokuluhlaza okunzulu ukuya kumbala obomvu we-chocolate, isityalo seZZ asinayo imida xa kufikwa elangeni.
Isityalo se-ZZ silungile kumabala asendlwini yakho aqaqambe kakhulu kwezinye izityalo, kuba sikhula ngokuxhomekeke kubungakanani belanga esifumana, kwaye izityalo ezinkulu ze-ZZ ziyamangalisa!
Omnye umzekelo wesityalo esingayi kukhula okanye intyatyambo ngaphandle kwelanga ngqo yi-hibiscus.
Umthonyama waseHawaii, i-hibiscus ngumthandi opheleleyo welanga kwaye iya kwenza intyatyambo ngokungapheliyo kunye nokukhanya okufanelekileyo. Ezi zityalo ziya kukhula kwimimandla yentlango yaseMelika, ekuxelela okuninzi malunga neemfuno zokukhanya ze-hibiscus, kodwa ifuna rhoqo, amanzi amatsha.
I-Spiky kunye nokuzonwabisa, i-dracaena (edlalwa ngegama lomthi wenamba) ukhetha ukukhanya okukhanyayo, okuthe ngqo ukubanceda bafikelele kwiindawo eziphakamileyo ezibonakalayo kwiimagazini zasekhaya nasegadini.
Izihloko zazo ezithandekayo zamagqabi aphezulu, iziqu zobisi zilungile kumagumbi aneesilingi ezixhonyiweyo, ukuba nje kukho ilanga elaneleyo ukuze lihlale limile.
Ngelixa ufumana indawo elungileyo yezityalo zakho ukusela ilanga lingena ngeefestile zakho, zama ukugcina engqondweni ubungakanani bemilinganiselo yeqondo lobushushu lohlobo ngalunye.
Ukukhanya kunye nobushushu yimikhosi ezimeleyo ngaphakathi endlwini, ngakumbi inikezwe ukuba zombini ezi zinto zilawulwa ngokubanzi. Ngokubanzi, kungcono ukufumana indawo efumana ukukhanya okuqaqambileyo ngaphandle kobushushu obugqithisileyo kunye nokubanda kweglasi yefestile uqobo.
Ngaphandle kwezona ndlu zixhaphakileyo ezifana nokukhanya kwelanga ngqo, zimbalwa phaya ezithi umntu ngamnye wesityalo abe nazo, nokuba kukugcwalisa izithuba apho kungakhona izityalo ezininzi. Ewe kunjalo, akunakwenzeka ukuba baninzi kakhulu, kodwa nazi ezimbalwa ezifanelekileyo ukuzizama.
Inyaniso encinci eyaziwayo: iipayinapile ziziqhamo ze-bromeliads, kwaye loo spiky stem phezu kwephayinapile yakho kwivenkile inokukhula ibe sisityalo esitsha sepayinapile! Iibromeliads ziza kwiindidi ezahluka-hlukeneyo zemibala kunye neepateni, ezenza ukuba zibe mnandi kakhulu ukuba zibe zezakho kunye nesiqwenga sesitatimende esifanelekileyo sokungena kwakho ekukhanyeni
Ukuba unefestile ekhanyisa ngokusisiseko yonke imini, eyona nto unokuyenza kwingqokelela yesityalo sakho kukudibanisa umthi we-sitrasi (okanye amathathu) kuwo.
I-Citrus ifuna i-cross-pollinators ukuvelisa iziqhamo, kodwa oku kungenziwa ngokulula nge-toothbrush okanye kwi-toothpick. Khetha uhlobo oluthathwa njengokuqina ukuba awuqinisekanga ukuba umthi we-sitrasi uza kuchuma ekhayeni lakho. Bona Okuninzi Izityalo zomthi zangaphakathi Apha.
Eyona nto intle phakathi kwezityalo zendlu inokuba yi-begonia rex, uhlobo olujongeka ngokugqibeleleyo, kunye nemibala eqaqambileyo ethi ichume kulo lonke ilanga elinokufumana.
Njengama-bromeliads, kukho iitoni zeepateni ezahlukeneyo, iimilo, kunye nemibala phakathi kwezi ntlobo, ngenxa yoko kusenokwenzeka ukuba indibaniselwano efanelekileyo ikho ilinde ukuba uyiqaphele.
Ngelixa unenye yezi phalaenopsis orchids ezazikhe zaboniswa kakuhle ziqhakazile ngokupheleleyo kwivenkile ebekwe kwikona, ii-oncidium orchids zikhona ukubonelela ngezihloko ezinkulu zeentyatyambo ezinamandla.
Ngokuqinisekileyo ii-orchids zizityalo zangaphakathi ezifana nelanga. Ngapha koko, ezi orchid zonwabile kwilanga elingqalileyo, zinkcenkceshelwa kanye okanye kabini ngeveki, kwaye zishiya zodwa kungenjalo. Ukuba ufuna iziqu ezide zenyawo ezigqunywe ngemibala eqaqambileyo, esi sisityalo oza kuzama kuso.
Umama odala ongumakoti welokhwe
Ngokuqinisekileyo, ii-violets zaseAfrika zenziwe. Amalungu osapho akho amadala kusenokwenzeka ukuba awakhumbula phakathi kwiminyaka ye-1900, xa aqala aziwa kakhulu eMntla Melika.
Nangona kunjalo, ii-violets zase-Afrika zingenza izihloko ezinkulu zeentyatyambo, ezixineneyo ngaphakathi kwendlwane yamagqabi anencasa enamanzi amnandi. Iipinki, iipepuli, bomvu, kunye nokudityaniswa kweminye imibala ziyafumaneka phantse kuyo yonke indawo. Khumbula ukuba amanzi kuphela avela ezantsi!
Ukuthomalalisa, ukunuka kamnandi, kwaye kuluhlaza okwesibhakabhaka, luhlaza, nemfusa, izityalo ze-lavender zongeza ukuqaqamba kuyo nayiphi na indawo.
Beka ilanga elithe ngqo endlwini yakho ukukhuthaza i-blooms yasezulwini entwasahlobo nasehlotyeni, kodwa khumbula ukunciphisa inyanga zasebusika ukuzisa ukukhula okutsha.
Ngokubanzi, ilanga elipheleleyo liqwalaselwa ubuncinci njengeeyure ezintandathu zokukhanya okuthe ngqo. Nangona kunjalo, ezinye iintlobo zezityalo ziya kwamkela ngaphezulu ngakumbi ukuba zinokuzifumana, ezinye zikhula ngeeyure ezisibhozo ukuya kwezilishumi ngelanga ngosuku.
Ukuba isityalo sifumana ilanga elipheleleyo, ke, qiniseka ukujonga ukufuma emhlabeni rhoqo, njengoko ilanga elipheleleyo liyomisa isityalo ngokukhawuleza.
Izityalo ziya kukuxelela yonke into eziyifunayo, nangona bembalwa abantu abanomonde ofunekayo ukuze bamamele kwaye batolike olu lwazi. Iimpawu zokukhanya kwelanga okuncinci kakhulu zininzi, kwaye zinokubandakanya:
Ukukhula kude kakhulu phakathi kwamagqabi, okanye ukuba ngumthetho. Uyakuqaphela oku xa isityalo siqala ukunyuka siye kumthombo osondeleyo welanga; Nangona kunjalo, ukuhambisa isityalo kwindawo ekhanyayo kwaye ukuguqula imbiza kancinci kunokunceda ukuthintela lo mbandela.
Imibala eluhlaza eluhlaza okanye emdaka emagqabini ekufuneka ibe yimbonakalo ebonakalayo luphawu olucacileyo lokuba isityalo asifumani kukhanya kwaneleyo. Umzekelo, isityalo sejade kufuneka sibe luhlaza oqaqambileyo xa sisempilweni, kunye neetoni ezikhanyayo ezikufutshane nesiqu segqabi ngalinye. Ukuba ezi toni zikhanyayo azisenakufunyanwa, isityalo sakho sikhalela iiyure ezininzi zokukhanya ngemini.
Ukunqongophala kwamagqabi lolunye uhlobo lonxibelelwano lwezityalo, olubonisa ukuba isityalo asihlanganisi ifotosinthesisi ngokwaneleyo ukuze sigcine iseti epheleleyo yamagqabi. Oku kwenzeka ngesiquphe ngesiquphe, kwaye isityalo siza kuqala ukuwisa amagqabi emva kwelinye xa lithe laqonda ukuba akukho kukhanya kwaneleyo kwiqela elipheleleyo.
Ngokubanzi, ukuba isityalo sifumana ilanga elaneleyo, siya kukhula ngokulinganayo nangokugqibeleleyo. Amagqabi aluhlaza okhanyayo kunye neziqu ezisempilweni, nezingqindilili zikuxelela ukuba isityalo sifumana konke ukukhanya esikudingayo!
Ewe kunjalo, okoko nje kungekho nto inye ngaphandle kweglasi phakathi kwesityalo kunye nomthombo wokukhanya (ilanga).
Xa ilanga liwela emva komthi eyadini, okanye ikhethini, akusekho ilanga ngqo kodwa lisasazekile (ngokungathanga ngqo) ilanga. Ke, okoko nje imitha yelanga ibetha ngokuthe ngqo ngaphakathi kwekhaya lakho, unelanga ngqo.
Impendulo emfutshane nguewe nohayi. Impendulo ende yile ixhomekeke kwisityalo, indlela oyinkcenkceshela ngayo, nokuba uyawafumana na amathontsi amanzi kwiindawo ezibuthathaka zesityalo.
Xa amathontsi amanzi ehleli elangeni, ayayikhulisa imitha, ngokungathi yiglasi ezenza nkulu. Oku kungawatshisa amabala kumagqabi okanye iintyatyambo zesityalo, ukuba zibhityile.
Ukuba kufuneka unkcenkceshele ngokuthe ngqo, qiniseka ukuba unkcenkceshela kuphela kwisiseko sesityalo, ukuze amanzi angene emhlabeni kwaye angahlali emagqabini. Eli nyathelo liya kunceda ukuthintela nawaphi na amabala atshileyo, avela xa amathontsi amanzi eshiye ithishu yesityalo kwindawo ethe ngqo.
Zama ukucwangcisa ukunkcenkceshela kwakho ukuze uphephe eyona ndawo ishushu okanye eqaqambileyo yosuku. Kwimozulu eshushu kakhulu, ukufumana amanzi emagqabini emthunzini kulungile, kuba amanzi aya kusuka abe ngumphunga ngokukhawuleza.
Nangona kunjalo, ukunkcenkceshela kwilanga eliqaqambileyo nelithe nqo naphi na kunokuba yingozi, kuba kunokuba nzima ukunkcenkceshela izityalo kuphela kwiziseko zazo kuxhomekeke kwi-morphology.
Wakhe wazibona ezo globhu zokunkcenkceshela kwiivenkile zokulima? Esi sisixhobo esikhohlisayo esincinci sokunkcenkceshela ngamaxesha angathandekiyo emini.
Gcwalisa nje umhlaba ngamanzi, uyityhalele emhlabeni kufutshane (kodwa hayi ngqo ngaphezulu) kweengcambu, kwaye mayiyeke iye kungena kumhlaba ojikeleze wona. Iingcambu zisasazeka kude kakhulu kunokuba ucinga, ke ukuba isityalo sifakwe embizeni, jolisa kwiindawo ezingaphandle zomhlaba embizeni.
Ngaphandle kwezindlu ezininzi ezidweliswe apha ngasentla ezikhula ngokuthe gca elangeni, kukho iintlobo ezimbalwa ezingayi kuphila ngaphandle kwawo.
Cinga umtya weeperile, umzekelo, okhawuleza ubune ube ngumtya omdaka, omdaka ngaphandle komlinganiselo ofanelekileyo wokukhanya. Iinkomo ze-orchids, ngokunjalo, aziphumeleli ngaphandle kwama-3,000 eenyawo zokukhanya yonke imihla.
indlela yokubopha iqhina elincinci
Nangona kunokuvakala kunzima ukuzama ukuhlangabezana neemfuno zokukhanya kwezityalo ezikhethiweyo, iiyure ezintandathu zelanga elithe ngqo zanele ngokwaneleyo kwiintlobo ezininzi ezinokufuna ilanga elingaphezulu kuninzi, kodwa eminye imithombo yokukhanya iyafumaneka.
Ukukhanya okungekuko kuyindlela elungileyo yokubonelela ngelanga elaneleyo ukunceda isityalo ukuba sigcine ubuhle baso obupheleleyo, kodwa ezo zibane zibiza kakhulu zokukhulisa azidingeki; nayiphi na ibhalbhu epheleleyo ye-LED iya kwenza ubuqili.
Unokujonga kwakhona iindlela zokunceda ukukhokela ukukhanya kwendalo endlwini yakho. Ukuba uneendonga ezimnyama okanye ze-matte, cinga ukuxhoma izibuko ezimbalwa zokuhombisa ukukhanya kokukhanya okuvela kwiifestile umva uye kwigumbi. Imibala yepeyinti elula kunye ne-glossier sheens yongeza enye into yokubonisa ukukhanya.
Khumbula ukwenza uphando lwakho rhoqo malunga nokukhanya okungakanani ukubonelela ngezityalo zakho. Ungafumanisa ukuba ezinye izityalo ezithi ukukhanya kwelanga kuzo zikhethe ukuhlala ngasemva kwekhethini elikufutshane nefestile endaweni yokuvezwa ngokuthe ngqo kwimitha yelanga.
Emva kokuba unokuqonda kakuhle ukuba izityalo zakho zizama ukukuxelela ntoni, kulula ukufumana indawo apho baya kukhula kwaye baphumelele ngolonwabo.
Zeziphi izityalo zakho ozithandayo zangaphakathi ezifana nelanga ngqo? Sazise iingcinga zakho kwizimvo. Ukufumana umxholo onxulumene noko jonga kwisikhokelo sethu izityalo ezikhuselekileyo kwiikati Apha.
Indlu yesitayile setusany
izipho zabatshakazi ezivela kumolokazana
itheyibhile yetafile yekhitshi
uyisebenzisa nini i-ms. okanye uphoswe